Ngaphansi ukusha elivame ukuqondwa ngayo umonakalo isikhumba ngenxa bekanye izinto noma uketshezi of lokushisa eliphezulu. Ngaphezu kwalokho umonakalo Okufanayo umphumela ukushaqeka noma ukuchayeka isikhumba imithi enobungozi amakhemikhali. Kunoma ikuphi, ukusha ngaso sonke isikhathi sihambisana ukuzwa abuhlungu ubuhlungu, lizinga lapho kuzoya kobukhulu. Nokho, ukuze kube lula isimo esinjalo, kufanele usebenzise amakhambi abantu lapho eshe, engeke iyobalimaza, kodwa kuyokusiza ngokushesha ukuthola ukusuka imiphumela ukuxhumana surface ashisayo. Nokho, kuyafaneleka ukuthi kuqala kuphela -degree ukusha ingelashwa nge imithi yendabuko, kwezinye izimo ukungenela emithi yesintu.
Okokuqala, ekwelapheni amakhambi ukusha Folk iqala nge isicelo abandayo endaweni ethintekile. Njengoba lokhu kube ice zihambisana indwangu ehlanzekile noma amanzi abandayo egabheni. Lokhu kuzokwenza kakhulu ukunciphisa ubuhlungu nokusha isasasa. Uma sikhuluma ekwelapheni ukulimala ke kufanele kube ukwenza ukulibopha ne itiye eqinile ukwenziwa, kanye namanzi lapho inombolo kahle esikhulu ka ohlukanisile abavamile baking soda. Lezi amakhambi abantu ngoba ukusha abasakwazi lasendulo, kodwa baphumelela esetshenziswa namuhla.
Ngezinye izikhathi kunezimo lapho yokulimala kakhulu abakwazi ngokushesha ubone udokotela. Ngomqondo onabile, inkulumo amakhambi abantu lapho eshe besigaba sesibili nesesithathu khona, kodwa lokhu akusho ukuthi bathole ukunakekelwa kwezokwelapha esikhathini esizayo ngeke idingeke. Okokuqala-ke Kuyaphawuleka ukuthi bhoboza Bubbles kwakheka kwi isikhumba akuvunyelwe njengoba lokhu kungaholela ekungeneni ngegciwane. Okokuqala, kufanele uxubha isikhumba vodka ngqo phezulu Bubbles ezokwenza ngidambise izinhlungu. Njengoba isinyathelo amanzi evamile usawoti ngensipho namanzi, futhi uma indawo umonakalo hit ebhuqwini njengendlela esikhundleni utshwala, isilinganiso esinjalo kuyadingeka.
Ungakhohlwa mayelana lo mkhuba umonakalo isikhumba ngenxa ukuvezwa kwesikhathi eside elangeni. Ekhona amakhambi abantu ngoba yilanga zizonciphisa kakhulu ubuhlungu. Ngaphezu ukhilimu kwandile, kungaba ukuthi ziphinde zisetshenziswe Endaweni ethintekile cindezela oncibilikiswe amanzi ingilazi yokudlela isitashi spoon.
Ungakhohlwa ukuthi okuholela ephezulu lokushisa ukulimala akazange ihluke ijubane sokuphulukiswa, ngokulandelana, amakhambi abantu ngoba ukusha kuyodingeka ukusebenzisa isikhathi eside. Ngokwesibonelo, ngosuku lwesithathu ngemva ukulimala kumele kuqale esebenzisa amafutha ukuphulukiswa. Ikakhulukazi ngempumelelo Kulezo zimo bekuyoba amafutha St John sika wort, futhi kuze kube lusuku lwesithathu, ungakwazi ugeza indawo kushiswe tincture zalesi sitshalo, futhi kuphela ke uqale gcoba ke ngamafutha. Uma isilonda ashisiwe aseyabhibha, yabe isiwela ubomvu kusiza incumbe wenza kusuka amazambane fresh, safaka isicelo sokuba izikhonzi cindezela.
Ammonia kusuka nail ukhunta: ukubuyekezwa. Indlela ukwelapha nail ukhunta ammonia?
Uhlikihla nge umbhunu umgogodla. Massage at hernia lumbar
Tincture Aloe, uju kanye Cahors iwayini: yini futhi kanjani ukwakheka
Soda Ukuphuza: izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ka umkhululi jikelele
Blackthorn. izakhiwo Inenzuzo abantu
Indlela ukuqeda isikhwehlela kule izindlela emphinjeni abantu?
UMbusi uPeter II: Biography, ikakhulukazi uhulumeni, umlando kanye nokuhlelwa kabusha
Umuntu umphakathi okusezingeni eliphezulu - is, njengoba umthetho, umuntu okuqondene yezikhulu
"Aerotel" - emahhotela aphambili kusukela Domodedovo
Princess Madlen Tereziya Ameliya Yozefina, uNkk O'Neill
"Sberbank uNdunankulu" - kuyini? Inzalo imali, izibuyekezo zamakhasimende kanye nabasebenzi
Yini zisebenzisa dryer lobuchwepheshe
Amakhethini Ngokhuni - isithunzi material yemvelo
Geza izinwele Estel Color Valiwe: Abesifazane Izibuyekezo
"Bion 3": analogs futhi yokusetshenziswa
Technical incazelo iPhone